Daawo:- wacdarihii dhex maray Brack Obama iyo Merkel iyo sawirro cajiib ah oo muujinaya | shumis.net
Home » Layaab » Daawo:- wacdarihii dhex maray Brack Obama iyo Merkel iyo sawirro cajiib ah oo muujinaya
Daawo:- wacdarihii dhex maray Brack Obama iyo Merkel iyo sawirro cajiib ah oo muujinaya
Madaxweynaha Maraykanka Barack Obama oo saakay soo gabagabeeyay booqashadii seddaxda cisho ee boqortooyada Ingiriiska ayaa isla maanta gaaray magaalada Hannover ee dalka Jarmalka, halkaasi oo booqasho uga bilaabatay.
Hoggaamiyaha Jarmalka Angela Merkel ayaa si diiran ugu soo dhoweysay Hannover, waxaana ay ka wada hadli doonaan dhaqaalaha dunida, Argagixisada, iyo qodobo kale inta uu socdaalka ku joogo dalka Jarmalka.
Bannaanbaxayaal luxayay boorar ay ku qoran yihiin hal ku dhigyo ayaa isugu soo baxay wadooyinka iyo goobaha la dejiyay wafdiga Obama. Inta uu joogo Jarmalka ayaa la filayaa inuu si rasmi ah u furo Carwo Ganacsiyeed lagu soo bandhigo arrimaha Teknoolojiyadda Casriga ah, taas oo la filayo inay ka qayb galaan illaa 6500 oo ganacsato ah iyo in ka badan 200,000 oo dadweyne booqanaya carwadan. Waxaan dadkani ka kala socdaan illaa 70 waddan. Aqalka Cad ee dalkan Maraykanka ayaa sheegay in carwadani ay muujinayso muhiimadda iskaashiga ee Jarmalka iyo Maraykanka gaar ahaan dhinaca Ganacsiga iyo dhinacyo kaleba.
Madaxweyne Obama ayaa sidoo kale booqday dalka Britian halkaas oo ay ka wada xaajoodeen arrimo kala duwan oo ay ka mid tahay Ganacsigu.
Title: Daawo:- wacdarihii dhex maray Brack Obama iyo Merkel iyo sawirro cajiib ah oo muujinaya
Posted by galmada Net, Published at April 28, 2016 and have 0 comments